5 Best Bars With Live Music In Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > 5 Best Bars With Live Music In Europe
Mbariro mhenyu mumhanzi mifananidzo inokukurudzira kose kose pakati Europe, kupa kuuraya nguva panzvimbo yainakidza apo kunwa uye nziyo ndokuyerera vakasununguka nzira. Kana iwe uri kutsvaga kuti unakidzwe mutaundi panguva yako chitima rwendo, tine mamwe mazano. Heano pamusoro yedu 5 mbariro mhenyu mumhanzi zvose pamusoro Europe:
1. Live Music At The Record Shop, Paris, Furanzi
Munhoroondo Shop nderimwe yakanakisisa mbariro mhenyu mumhanzi muFrance. Zviri kunze Bastille Metro yemapurisa. Kwete chete ndizvo nyore kusvika, asi kuri unodziya chaizvo. Kubhawa iri mberi, uye ine chaiyo konzati danho kumashure kwe nzvimbo yemimhanzi, with the audience space hidden behind it.
veko vanokurudzira kuwana nzvimbo kana kushanyira ino mhenyu mimhanzi bhar iri pane yako chekuongorora chekufambisa. Nekuti kupinda akasununguka, zvingava zvakaoma kuwana chigaro pa kubhawa. Kamwe uri, uchakwanisa kunakidzwa Genres zvose zvinoridzwa, chose mhenyu.
2. Live Music At Liquid, Luxembourg City, Rukuzemubhogu
An dzinonakidza bhaa pamwe mhenyu mumhanzi vachangobva akaisa Luxembourg pamusoro map European Nightlife. Liquid Cafe riri munzvimbo Grund nzvimbo yevedza pamusoro Luxembourg. Kana uine zvose coctail vanonwa uye ndege doro vadikani mu bato kufamba kwenyu, iyi ndiyo nzvimbo kuenda.
Kunyange kana uri kunakidzwa chaizvo Kugara pfupi muna Luxembourg, iwe unenge zvichida kukwanisa kubata mhenyu mumhanzi inoratidza muna Liquid musi Chipiri neChina. Kana uri munhu weeknight murwi, iyi ndiyo nzvimbo.
Bonn kuna Amsterdam Zvitima
Munich kuna Amsterdam Zvitima
3. Masvingo, Rome, Itari
Ungafungidzira kuwana mutsva zvomunharaunda bhaa pamwe mhenyu mumhanzi kushanyira ose usiku panguva yako European pazororo? pinda Masvingo, mumwe kupfuura kunozivikanwa mhenyu mumhanzi mbariro muRoma, pamwe s ose usiku.
The bhaa wacho nenhoroondo nzvimbo zvakarurama mumwoyo San Lorenzo mudzidzi nzvimbo zvinoreva uchazonakidzwa kusangana zhinji dzinonakidza veko. uchitikurudzira, nokuti zvechokwadi Roman ruzivo, Le eki kunokosha-kushanya - iri chero usiku revhiki.
zvinenge, Idris Elba anoziva izvo zvinhu chokubatanidza kupinda tarenda bhaa pamwe mhenyu mumhanzi. umbozha ake bhaa, The Parrot, riri muna Aldwych uye inopa munhu sanganisira ruzivo.
Nepo imba bhendi kukukohwa pamwe naka zvesimba, haufaniri kurasikirwa Mr. Elba kwakaita nguva DJ rinovira. Ndizvozvo - the Hollywood mutambi zvinowanzoda mugove kunakidzwa nokuita DJ rinovira, kubhawa vanoitisana 'mufaro. cocktaileja Zvakajeka-mavara tariro mafungiro mberi munyika iyi inopisa shiri-music mhenyu mumhanzi bhaa.
Zvikafadza vashanyi uye veko vanoda mimhanzi iyi mhenyu bhaa, The Waterhole yave iripo kupfuura 25 makore. pose iwe shanyira Amsterdam, ichava chinhu chokupa iwe, kunyange masikati. Emusi zuva, hakuna chinhu chinopfuura vakazorora nomusi kubhawa kuti yakakura chinjiri.
Kana nyore kuwana zviri kumusoro zvako zvinokosha, The Waterhole anotora korona nokuda yakanakisisa pakapuranga pamwe mhenyu mumhanzi muAmsterdam. Nokuda kwayo nechepakati nzvimbo, chinowanzoonekwa yakatsvikinyidzana. Chimwe chikonzero nei mapoka rudo ndiwo awa kufara, huchavapo kusvikira 9 PM!
Kushanyira pakati Best Live Music Bars ndiyo nzira yakarurama kutanga kana kugumisa yenyu Europe Train Trip, saka Book Tickets Your Now!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best mbariro Live Music mu Europe” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bars-live-music-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Luxembourg, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe